Blueberry Ghere Oatmeal - Ezi Ntụziaka
nhicha ahụ dị ọcha na mmanya na soda
ogwu ata puru iche nke ihendori
broccoli salad na cranberries na walnuts
Blueberry Ghere Oatmeal
Oatmeal na-eme achịcha bụ ụzọ dị ụtọ ma dịkwa mfe iji bido ụbọchị gị!
Goodnessdị mma nke ọka oat na acha anụnụ anụnụ na protein juru almọnd niile na-atọ ụtọ ma sie n'ime nri ụtụtụ kachasị amasị ezinụlọ!
Oatmeal a na-acha beri beri a bụ osisi gị ọgịrịga ụdị nri ụtụtụ. Ọ dị mma, na-ejuputa ma na-atọ ụtọ nke ukwuu! Ọ na-emegharị ahụ nke ọma ka enwere ike ịme ya ngwa ngwa tupu oge emee ka ọ bụrụ ụzọ kachasị mma iji mee ka ahụ gị nwee ume n'ụtụtụ ụbọchị izu ụka!
Obi dị m ezigbo ụtọ na mụ na SPLENDA® Stevia Sweetener esorola gị iweta nri a na-eme ka afọ kpoo ọkụ.
Mfe Blueberry Oatmeal Ejiri
Anyị maara nri ụtụtụ bụ otu n'ime nri kachasị mkpa n'ụbọchị. Nri jupụta gị ma nye gị ume maka ụtụtụ bụ mmalite dị mma n'oge ọ bụla! Dị ka oatmeal na-amasị anyị, anyị hụrụ oatmeal na-ahụ n'anya ma uzommeputa a n'elu ndepụta.
Ime oatmeal na-eme achịcha dị mfe, anyị na-ejikọta oat, àkwá na mmiri ara almọnd (ma ọ bụ mmiri ara ehi ọdịnala) na mkpụrụ osisi ọhụrụ ma ọ bụ mkpụrụ osisi.
Site na ịdị mma niile a na-abanye n'ime oatmeal a na-eme achịcha, m na-anwa ka m ghara iburu ya na shuga agbakwunyere ya na usoro a m na-eji SPLENDA® Stevia enertọ . Ihe a na-eme ka calorie a na-enweghị kalori bụ ihe na-eme ka ihe ọkụkụ na-atọ ụtọ, ma na-enweta ya ụtọ site na akwụkwọ stevia. Ahụrụ m ya n'anya n'ihi na ọ bụghị naanị na ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu, ọ nweghị mgbakwunye ma ọ bụ agba agbakwunyere, enweghị ihe nchekwa, yana naanị ihe ndị na-abụghị GMO ma ọ nweghị ilu na-elu ilu.
Ihe ngosi nke pawuda na amamịghe nke almọnd wepụ mere ka nri ụtụtụ a bụrụ abụ!
Ozugbo ọ gbasasịrị n'ime pan ahụ, ana m etinye ụfọdụ bluuberi ndị ọzọ n'elu na-ejide n'aka na nrị ọ bụla na-esi na ekpomeekpo.
Mgbe m mere ihe desser nwere mkpụrụ osisi, m na-etinye ya n’elu ihe na-atọkarị ụtọ. Ihe ntanye bụ ihe na-atọ ụtọ ma na-egbu mmiri fesa n'elu (ihe dịka ị ga-etinye n'elu Berry mkpirisi ) ma sie ya ruo mgbe ọlaedo.
Enwere m mmasị ịtinye ọka na mkpụrụ (ma ọ bụ aki oyibo) na ntaneti m maka uto na obere crunch.
Maka nri ụtụtụ, anyị na-efe ude achicha achicha na ude mmiri nke ude ma ọ bụ mmiri ara ehi na ụcha bluuberi ọhụrụ.
ole ka mmanụ aakedụ na-acha mmanụ a honeyụ dị mma
Nwere ike ime oatmeal?
Ee !! Nwere ike maa ime achịcha ma ọ bụrụ na ịnwalebeghị ịme ya, ị ga-enweta ezigbo ọgwụgwọ.
Otis bụ nri ụtụtụ dị oke nri, ha zuru oke maka oyi Oats nke abalị ma ọ bụ na Apple Cinnamon Oatmeal ma nke kachasị mma bụ ime oatmeal!
Ihe odide a dị iche karịa ọka oat na-eji esi nri mgbe niile na ite dị ka otis na-ejide ọdịdị ha nke ọma.
Nwere ike ifrii oatmeal emeela?
Oatmeal na-eme achịcha nwere ike ịkwadebe ma kpoo oyi tupu ị ghee ya. Iji na-esi nri, wepụ ya na friza ma kpochaa na ngwa nju oyi n’abalị. Ime dị ka a gwara gị.
Nke a bluuberi bred oatmeal uzommeputa na-eme 9 servings. Ọ bụ ezigbo nri ụtụtụ ị ga-eme n'ụtụtụ Sọnde ma nwee obi ụtọ n'ime izu. Ọ na-ekpughere n'ụzọ zuru oke na microwave iji nwee ọ forụ maka nri ụtụtụ kwa izu.
Ọ bụrụ na ị ga-achọ idebe ya ogologo oge, m ga-atụ aro ịkpụ ya na servings ma tinye ọrụ ọ bụla n'ime akpa friza. N'ụtụtụ, wepụ otu ọrụ na ikpo ọkụ na 70% ike ruo mgbe iwe dị ọkụ.
Kedu ihe bụ ọdịiche dị n'etiti Otis ọsọ ọsọ na ọka agba ochie?
Ntụziaka a na-eji Oats Agba Ochie. Enwere ọdịiche dị n'etiti otis ọsọ ọsọ na ọka okike ochie mere ị ga - achọ ijide n'aka na ị na - eji ụdị dị iche iche.
Otutu oats na-agbakọta ka ha mepụta Ochie Ejiri Ejiji ebe a na-egbutu Oats Quick n'ime obere iberibe ka ha sie nri ngwa ngwa. Obere mpempe nke oats ngwa ngwa tinye ya n'ime mmiri mmiri ma ghara ijide ọdịdị ha nakwa na nhazi a.
hamilton beach ngwa ngwa osi ite na okpomoku
Gbanwe oat ga-agbanwe ma oge isi nri na udiri nke uzommeputa a.
4,84site na6votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe10 Nkeji Oge nri35 Nkeji Oge zuru ezuAnọ Nkeji Ọrụ9 servings Onye edemedeHolly NilssonGoodnessdị mma nke ọka oat na acha anụnụ anụnụ na protein juru almọnd niile na-atọ ụtọ ma sie n'ime nri ụtụtụ kachasị amasị ezinụlọ! Bipute Ntụtụ
▢3 ¼ iko ochie otis
▢12 ngwugwu nke SPLENDA® Stevia Sweetener
▢abụọ ngaji pawuda
▢½ iko almọnd coarsely chopped
▢abụọ ngaji ntụ ịme achịcha
▢1 ¾ iko mmiri ara ehi almọnd
▢⅓ iko bọta gbazee
▢½ ngaji almọnd wepụ
▢1 ½ iko blọub ekewa
▢3 ngwugwu SPLENDA® Stevia Sweetener
▢1 ngaji ntụ ọka
▢1 ½ tablespoons bọta
▢3 tablespoons almọnd coarsely chopped
▢abụọ ngaji otis
Kpochapu ọkụ na 350 Celsius.
N'ime nnukwu efere jikọtara ọka, SPLENDA® Stevia Sweetener, cinnamon, almọnd, ntụ ntụ na nnu.
Tinye na àkwá, mmiri ara ehi almọnd, bọta na wepụ almọnd. Gwakọta nke ọma.
N'ogige atụrụ na ¾ cup blueberries ma gbasaa na 9 × 9 tee.
Top na fọdụrụ ½ cup blueberries.
Gwakọta ihe ntanye na obere efere ma gwakọta ya ruo mgbe ị ga-enwe nnukwu iberibe. Wụsaa n'elu blueberries.
Ime 35 - 40 nkeji
Calorisị:Ogbe 298,Carbohydrates:28g,Protein:8g,Abụba:17g,Abụba Ajuju:6g,Cholesterol:59mg,Sodium:Ogbe 286mg,Potassium:Ogbe 312mg,Eriri:5g,Sugar:3g,Vitamin A:Ogbolu 335IU,Vitamin C:2.4mg,Calcium:Ogbe 155mg,Iron:2.1mg
Isiokwuime oatmeal, bluuberi N'ezieNri ụtụtụ Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Obi dị m ụtọ na mụ na SPLENDA® Stevia Sweetener rụkọtara iji wetara gị usoro nhazi ọkụ a nke afọ. Mgbe a kwụrụ m ụgwọ maka post a, echiche na echiche niile bụ nke m. Arụ ọrụ na nnukwu ụdị m hụrụ n'anya na-enye m ohere ịnagide gị ezigbo ntụziaka ị hụrụ n'anya!
N'abalị Igwe friji Oatmeal
Kuki nri ụtụtụ banana
Cherry Cheesecake Dip (Ọ bụghị Ime)
N'ụdị Mac na Chiiz
Eleta Sioux Falls
New eji maka Coke (na ndị ọzọ colas)!
Ikwu Baklọ Nri BBQ Chicken Taquitos
Ofe Ọhịa Chicken Ohia (enweghị ude)
Olee Otú YOU Ga-esi Na-arụsi Ọrụ Ike? (+ 15 Akwa Nri & Gaa Nri)! #BeActiv
Udeejiri Ude Nzuzo
Ogwu Basil Pesto